सन्नी लियोनीले वरुणलाई दिएको त्यो फोन नम्बर, त्यसपछि ……! - Aajako Nepali Khabar
Home मनोरंजन सन्नी लियोनीले वरुणलाई दिएको त्यो फोन नम्बर, त्यसपछि ……!
सन्नी लियोनीले वरुणलाई दिएको त्यो फोन नम्बर, त्यसपछि ……!
मनोरंजन admin December 5, 20200Comment
दिल्लीको मौर्या इन्क्लेबमा बस्दैआएका पुनित अग्रवाल नामका २७ वर्षीय युवक पछिल्लो केही दिनयता फोन रिसिभ गर्दैमा हैरान छन् ।यतिसम्म कि, पछिल्लो ३ दिनको अवधिमै उनले देश र बाहिरबाट समेत ४ सय भन्दा धेरै फोन उठाउनुपर्यो । अधिकांश मानिसले सन्नी लियोनसँग कुरा गर्नका लागि उनलाई रात दिन फोन गरेको बुझिएको छ ।
अग्रवालले यसबारे प्रहरीकहाँ उजरी समेत दिएका छन् । पुनित एक प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्छन् । अनुसार सन्नी लियोनको फिल्मन अर्जुन पटियाला रिलिज भयो । फिल्ममा एक सिन यस्तो छ कि, सहायक अभिनेता वरुण शर्मालाई सन्नीले आफ्नो नम्बर दिन्छिन् ।
तर सन्नीले दिएको त्यो नम्बर सन्नीको नभएर तिनै युवा पुनितको थियो । गत शुक्रबारदेखि नै उनलाई तारन्तार फोन आइरहन्छ । तीन दिनसम्म लगातार फोन आएपछि उनी अदालतमा जाने निधो गरेका हुन् । ह्वाट्सएप, भाइबर लगायत सञ्जालमा समेत फोन गरी सन्नीसँग कुरा गर्न चाहेको भन्न थालेपछि ती युवक हैरान भएको बताउँछन् ।प्रहरीले भने यस्ता घटनामा तत्काल चासो नदेखाएपछि उनी अदालत जाने भएका हुन् । उनका अनुसार अधिकांश युवक सन्नीको फोन नम्बर भन्दै पुनितलाई फोन गर्न थालेका हुन् ।